Korean Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(234 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Loading ... Kwemakore, kubhejera paIndaneti kuKorea kwakange kusingabhadharwi kubheti yemabhiza, mabhasikoro nemakwikwi emigwagwa, pamwe nemitambo mu lotti. SportsToto (SportsToto) yakavambwa muna 1997. Muna 2000, yakanyoresa macasino, asi mazhinji acho anoshandirwa vashanyi vekunze chete. imba imwechete yekubhejera yaive yakavhurika kune vagari vemo. Sezvo michina yekugezesa munyika ichibvumidzwa mumakasino chete, iwo anongogumira kune maSouth Koreans.
Zvizvarwa zveSouth Korea zvakarambidzwa kutamba mukasino, kwete zvekumba chete, asiwo kunze kwenyika. Tarisa, hongu, zvakaoma kumisikidza kurambidzwa uku, asi kuri kupfuudza zvakanyatsorangwa zvinoenderana nemutemo "Anowanikwa mutambi wekunze" aine nguva shoma yekuiswa mutirongo kwemakore matatu uye faindi inosvika 3 25 US madhora.
Vagari vekuSouth Korea vanobvumidzwa kutamba pakati peshamwari uye nhengo dzemhuri pamari shoma kwazvo (isingasviki masendi gumi). Isu tinocherekedza mune yedu catalog online kubhejera munyika, kune marotari maviri: Lotto naToto. Yechipiri chimiro chemitambo yekubheja.
Kubhejera muSouth Korea
MuSouth Korea, hapana mutemo pamhepo kubhejera. Panguva imwecheteyo pakave nemitemo yakati wandei yakanangana nekuderedza mitambo yemagariro nemavhidhiyo. Parizvino, mumwe haakwanise padanho repamutemo rekudzora masosi macasino epamhepo munyika. Zvisinei, kune zvikwangwani zvisiri pamutemo zvinotungamirirwa nemapoka akarongeka ematsotsi. Kana zvikaonekwa nemasangano ekuchengetedza mutemo, masaiti aya anovharwa nekukasira, uyezve nekukurumidza anovhura matsva.
Chikamu chakakosha chevagari vemuSouth Korea chinoshanyirwa nenzvimbo dzese nevekunze pamhepo nzvimbo dzekubhejera. Sezvo hurumende ichichengeta mari yayo, yakazivisa hurongwa hwekutanga kurwa kwakakomba nevashandisi vekunze. Kuwedzera kwekutarisa pamhepo kubheja nzvimbo pamutambo.
List of Top 10 Korean Online Casino Sites
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSouth Korea
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuSouth Korea, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epamhepo kukwidziridzwa, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuSouth Korea.
Ikanyanya kukamba koreino Korea
Dear Lena, nhasi ndichakuudza nezvekuenda kwake kuSouth Korea, kunyanya mumusoro wenyika iyi huru kuSeoul. Kune dzakanaka, dzakachena uye dzinofadza. Zvisinei, zvinoratidzika kwandiri kuti muNorth Korea guta guru Pyongyang, mumigwagwa yakachena, zvakare, asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Nekudaro, Lena, iwe unonyatsoziva kuti zvematongerwo enyika hazvindifadze, hazvigone kutaurwa nezve kubhejera. Iri muSeoul, kasino hombe muKorea - Paradise Casino Walkerhill. Kwete unozochida nekuti inosimudzira kubhejera kumisikidza mumwe wevanonyanya kufarira vatambi - Robert De Niro. Kana iwe unoda Al Pacino? Chero zvazvaive, sekuratidzwa kwaDe Niro pamabhodhi mazhinji. Pane dzimwe nguva apo ini ndanga ndichitanga kufunga kuti ndiye muridzi weParadhiso Casino Walkerhill. Kazhinji, dai chaive chokwadi, ndingadai ndisina kushamisika.
Iyo Paradhiso Casino Walkerhill inotamba vatorwa chete, kunyanya vagari vekuJapan. MaKorea pachawo aripo sevashandi chete: vatengesi, vatengesi, bartenders, maartist nevamwe. Nenzira, vashandi vepasino ino vakanaka kwazvo. Vese vane hunhu, nyanzvi uye vanotaura zvakanaka Chirungu, chiJapanese uye mimwe mitauro yekune dzimwe nyika, chete neRussia sechinhu chisina kunyanya. Asi zvikasadaro hapana hutsinye, kusagadzikana kwehukasha uye maitiro akashata. Zvese zvaunoda, Lena.
Ino inguva yekuenda mune zvakadzama, nekuti, sezvamunoziva, mavari mune uya anowanzo kuverengerwa nekugadzirwa kwekubhejera. Casino iri muSeoul mudunhu Kavanchzhin-gu Street Uokerhil-177 asi kuSheraton Hotel. Usatombondibvunza kuti ndinorangarira sei kero. Muchokwadi, ini ndakangoiwana paInternet, uye kucasino yakasvikwa netekisi, ingo udza mutyairi zita racho.
Walkerhill inotaridzika zvikuru kunze nekunze. Mifananidzo chete yekasino inorambidzwa zvakanyanyisa, kunze kwekungoshanda bhawa neresitorendi. Varidzi veCasino havadi kuzorora vatengi vakatyora flash. Mukuwedzera, vamwe vanhu vanonyara pamusoro pezvavanofarira kubhejera. Kazhinji, nekuda kwezvikonzero izvi nemufananidzo dambudziko chairo. Asi usazvidya moyo, Lena, chimwe chinhu chandakakwanisa kupfura.
Paradise Casino Walkerhill iri kushanda kutenderera nguva uye pasina kukanganiswa. Panyaya yekuonekwa kwechiso kudzora uye zvimwe zvakaomarara zvinodiwa ipapo. Kunze kwekunge iwe Lena ungasabvumidzwa, kana iwe ukapfeka imwe yemadhirezi avo akajeka uye akashata, uye baba vako zvirokwazvo havasi kupotsa mhuri mumabhurugwa ane mitsetse uye mafiripi, vakapfeka masokisi akasviba. Kunyangwe kunyangwe paine chokwadi chekuti mune yakavakidzana neJapan, kutaridzika kunoonekwa sekugamuchirwa.
Kutaura nezveJapan, pamba, vakomana ava vazhinji vacho vakadzikama, vakatonhorera uye vakachengetedzwa, asi kunze kwenyika sekunge vanovatsiva. Iyo Paradise Casino Walkerhill ndakave nerombo rakanaka kusangana nemurume anonzi Tanaka Esutigatsu. Paakazvizivisa, ndakambomubvunza kana ari nhengo yemhuri yeninja. Akatanga kuseka, achiratidza mazino ake akakombama ndokuti iyo chikamu chemhuri yekwaHonda. Ipapo ndakakumbira tositi yekujairira. doro rakaregererwa muchiJapan zvakaipa - saka ndagara ndichitaura, uye ini handina kutenda. Asi mushure mehafu yeawa yekushandisa makoketi akasiyana Tanaka akangoerekana akanganwa Chirungu uye ini ndaive neshungu yekutamba patafura ye blackjack. Runyerekupe rwaive rwechokwadi. Izvo zvakatotanga obliquely kutarisisa kuchengetedza basa. Asi ini neimwe nzira ndakadzikamisa mukomana uye ndikamugarisa pasi patafura.
Saka unoziva Lena, achitamba blackjack zvakanyanyisa. Saka ndakafunga kubatsira murombo wechiJapan ndokumutengera machips. Mutambo wakatanga, ndakanga ndisina rombo rakanaka, $ 3,000 yakaenda kucasino Relief Fund. Panguva imwecheteyo, Tanaka neimwe nzira akahwina zvisinganzwisisike. Aitaridzika zvirinani izvozvi, uye nemwana mudiki akafara kukunda kwese. Ndakafunga kuti pamwe naye zvese zviri mugwara ndokuenda kunofona. Kukurukurirana kwakandimisa kwemaminitsi makumi mana akanaka. Pakudzoka Tanaka akatokwanisa kusiya mune imwe kubvisa 40. Akatanga kuchema uye kupa kuti aise bhachi rake, shati, shangu, uye wachi dzaCasio. Nekuda kweizvozvo, magadhi akatungamira maJapan, kunyangwe ndaiedza kuvamisa. Hazvibatsiri. Asi ini ndinofunga iwe unonzwisisa kukosha kwaLena - kuti akadaro maJapan mumaawa mashoma ezororo.
Usatombo kunetseka, Lena. NaTanaka zvese. Aigara kuSheraton. Chandisina kuziva. Kuva nemhosva kwakandikurudzira kuunza mumba Tanaka, patakagara mutekisi uye ini ndikatanga kubvunza kuti anogara kupi. Pano poluzasnuvshy wechiJapan akatanga kutakura biliberdu. Izvo zvandaigona kungopindura kuti: "Uri kupi iwe fucking live!" Nekuda kweizvozvo, nhare yake yakarira uye akangoerekana apepuka. Ndakaunza maJapan pamusuwo wehotera, mushure meizvozvo vashandi vakamubatsira kuti asvike kukamuri rako. Gare gare ndakazoona kuti Tanaka - a normal guy. Ehe, izvi zvakajairika, izvo zvinogona kukwanisa kusiya kasino $ 15,000. Kunyangwe, inogona kuve yakajairika kudada kweJapan.
Zvirinani kudzokera kuParadhiso Casino Walkerhill. Blackjack inokatyamadza chaizvo, asi mune huru kasino korea, kune mimwe mitambo uko 7 dzakasiyana roulette, 15 matafura eblackjack, angangoita 150 slot michina, gumi nemaviri matafura e poker uye craps, pamwe nekakoe- iyo isingafungidzike nhamba yematafura yebaccarat. Handizive kuti sei vanhu vachifunga muSouth Korea, mutambo uyu wakakurumbira.
Kunyangwe baccarat ichiri kudiwa mune mamwe madenderedzwa, asi hazviite kuti vakwanise kukwikwidza neTexas Hold'em kana tepi. Nenzira iyo Walkerhill aive akanaka kwazvo:
Lena, usatonge zvakanyanya pikicha yangu isina chinhu isina chinhu, taura zvakafanana nekutora ipapo kwakaoma. Uye kwete kusvikira ave. Walkerhill yakazara mhepo pano inonyatsotaridza uyu mufananidzo:
Zvakanaka, inguva yekutora Paradise Paradise Walkerhill. Nekudaro, wakapamhama, vashandi vakanaka, bhawa rakakura neresitorendi, sarudzo huru yemitambo. Ndezvipi zvingave zvakashata? Kunzwa kwekungogara uchitariswa, saka kune mamwe makasino uye haanyatso zorora. Kudzoka muParadhiso Casino Walkerhill akawandisa matafura ebaccarat, asi izvi ndizvo zvandinoda. Sezvo chirevo chichienda: Usade kadhi - tenderera vhiri remhanza.
Zvakadaro Paradhiso Kasino Walkerhill inzvimbo yakanaka. Robert De Niro haana kunaka kuraira. Asi kana iwe usingatendi Lena Robert, hautyairi, asi zvirinani kuenda uye wozvitarisa zvese pane chako chiitiko. Kunyangwe ini ndinogona kupa mari. Usanzwe urombo, seParadhiso Casino Walkerhill yandaida chaizvo.
0.1 Kubhejera muSouth Korea
0.2 List of Top 10 Korean Online Casino Sites
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSouth Korea
2.2 Ikanyanya kukamba koreino Korea
tsvuku tsvuku hapana dhipoziti bhonasi